China Geomet mkpuchi breeki diski, ụlọ ọrụ enyi na gburugburu ebe obibi na ndị na-ebubata | SANTA
Dị ka e ji ígwè mee rotors breeki, ha na-esi nchara nchara na mgbe ekpughere ya na mineral ndị dị ka nnu, nchara (oxidization) na-agba ọsọ ọsọ. Nke a na-ahapụ gị na rotor dị nnọọ njọ.
Dị ka o kwesịrị ịdị, ụlọ ọrụ malitere ilele ụzọ ha ga-esi belata nchara nke rotors. Otu ụzọ bụ itinye ihe mkpuchi Geomet iji gbochie nchara.
Geomet diski breeki
Dị ka breeki rotors bụ ígwè, ha na-emekarị nchara na mgbe ekpughere ya na mineral dị ka nnu, nchara (oxidization) na-eme ka ọ dị ngwa ngwa. Nke a na-ahapụ gị na rotor dị nnọọ njọ.
Kedu ihe mkpuchi geomet?
Ihe mkpuchi GEOMET bụ ihe mkpuchi mmiri nke na-etinye aka na ya breeki rotors iji nyere aka gbochie corrosion.
Ndị NOF Metal Coatings Group mepụtara mkpuchi ahụ na nzaghachi maka iwu gburugburu ebe obibi siri ike na nchegbu. Ngwaahịa a na-esi na ya pụta bụ nke a na-eji gburugburu ụwa na ihe karịrị nde 40 breeki diski kwa afọ.
Ọ na-akwado REACH na Ntuziaka Ụgbọala Ọgwụgwụ nke Ndụ nke European Union. REACH bụ ụkpụrụ "nadoro iji kwalite nchekwa ahụike mmadụ na gburugburu ebe obibi pụọ n'ihe ize ndụ nke kemịkalụ nwere ike ibute". Ntụziaka ụgbọ ala ngwụcha nke ndụ (2000/53/EC) bụ ntuziaka na-ekwu maka njedebe nke ndụ maka ngwaahịa ụgbọ ala.
Kedu uru ọ bara?
● Ọ ka mma:Ọtụtụ ụgbọ ala ụbọchị ndị a na-agba na wiil alloy nwere ọtụtụ ohere iji hụ na breeki. Ihe ikpeazụ ị ga-achọ ịhụ n'okpuru wiil ndị ahụ bụ rotors nchara. GEOMET na-ebelata nchara ma mee ka rotors gị dị mma.
● Ọmarịcha braking mbụ: GEOMET anaghị esi ísì ụtọ yana ọ na-etolite ihe nkiri mkpuchi mara mma ozugbo akpọnwụwo. Nke a pụtara na mkpuchi ahụ dị gịrịgịrị nke na ọ naghị emebi ogo breeki n'oge ejiri breek na mbụ.
● Nguzogide okpomọkụ dị elu: Ihe mkpuchi ahụ nwere ike idi ruo 400 ° C (750 ° F) ma ka na-enye ezigbo nguzogide corrosion na-enweghị crystallization n'oge okpomọkụ cycles ma ọ bụ guzobe organic resins. Nke a pụtara na mkpuchi ahụ agaghị agbawa ma na-eyi ya nke ọma.
● Ihe mkpuchi mara gburugburu:Enweghị chromium na ngwọta na ebe ọ bụ na a na-etinye ya na usoro mechiri emechi, a na-emegharị mmiri mmiri fọdụrụnụ. N'oge ọgwụgwọ, naanị ihe na-ekpochapụ bụ mmiri, ọ bụghị kemịkalụ.
● Dị nro na nke na-adịghị mma:Ozugbo a gwọrọ ya, GEOMET dị gịrịgịrị na nke na-adịghị mma nke na-eme ka ọ bụrụ nnukwu nhọrọ maka ngwaahịa a na-azụ ahịa ebe a na-edozi rotors, na-ebufe ma na-echekwa tupu ebugara onye ahịa ya. Ihe mkpuchi ahụ na-edobe ihe dị ọcha yana dịtụ ọkụ ma hụ na ị nwetara breeki gị n'ụdị dị mma.
Aha ngwaahịa Geomet breeki diski maka ụdị ụgbọ ala niile
Aha ndị ọzọ Geomet breeki rotor, diski eme achịcha, rotor breeki
Ụzọ mbukota Mkpokọta nọpụ iche: akpa rọba na igbe katọn, wee pallet
Ihe onwunwe HT250 dabara na SAE3000
Oge Mbuga ozi 60days maka 1 ruo 5 containers
Ibu Ibu OEM izizi
Santa breeki nwere ntọala 2 nwere ahịrị nkedo 5 kwụ ọtọ, ụlọ ọrụ igwe 2 nwere ahịrị igwe karịrị 25.
Nkwakọ ngwaahịa: ụdị nkwakọ ngwaahịa niile dị.
Ahụmịhe mmepụta diski breeki afọ 15
Na-elekwasị anya na diski breeki, dabere na ịdịmma
Ịmara maka sistemu breeki, uru mmepe diski breeki, mmepe ngwa ngwa na ntụnyere ọhụrụ.
Nke gara aga: Ihe mgbochi seramiiki, na-adịte aka na enweghị mkpọtụ
Osote: Mpempe breeki ọla dị ala, arụrụ ọrụ breeki dị mma
rotor breeki akpaaka
breeki diski akpaaka
ụlọ ọrụ breeki diski
emeputa diski breeki
diski ụgbọ ala
ụgbọ ala diski
diski breeki ụlọ ọrụ
Ngwaahịa na-ekpo ọkụ - map saịtị mpe mpe akwa breeki akpaaka, diski breeki, Pads breeki na-arụ ọrụ, Ụgbọala akpụkpọ ụkwụ breeki, Ụgbọ ala breeki, breeki drum volvo,